Shiinaha Custom Custom Ku marooji Fidinta koronto - Soosaarayaasha - Dongguan Qiaofeng Qalabka Qalabka Caaga Co., Ltd
Hoyga >Alaabta >Qaybaha qalabka guryaha caaga ah>Ku marooji Balaastiigga balaastiigga ah
6 * 30mm PE ballaarinta
7 * 35mm furka balaarinta PE
Baalalka makiinadda ee tubbada ballaadhinta waxay ka hortagi kartaa tuubbada ballaadhsiga inay rogto oo ay kordhiso khilaafku inta lagu jiro rakibidda. Iyada oo naqshadeynta qalooca ballaarinta ee qumman, waxay si weyn u xoojineysaa xoogga isku-xidhka waxayna si wax ku ool ah uga hortageysaa in furku uusan dhicin.
8 * 40mm PE fur ballaarinta
7.5 * 38mm PE ballaarinta
9 * 40mm PE fur ballaarinta
Su'aal: 1. Ma leedahay warshad kuu gaar ah Haa, waxaan soo saare ka nahay Shiinaha in ka badan 10 sano. Warshaddeenu waxay ku taal Gobolka Guangdong. 2. Sideen ku booqan karaa wershadaada? Fadlan si naxariis leh noo sii ogeysii haddaad qorsheyneyso inaad booqato. Waxaan ku tusi karnaa wadada ama kugu soo qaadan karnaa saldhigga ama garoonka diyaaradaha.